नेटफ्लिक्सका दुई सशक्त फिल्म - मनोरञ्जन - नेपाल
‘भिडियो अन डिमान्ड’ साइट नेटफ्लिक्सको आगमनपछि ‘हलमा चल्ने मात्र फिल्म हुन्छ’भन्ने परम्परागत मान्यतामै प्रश्न उठेको छ । कतिपय दिग्गजको चिन्ता छ, नेटफ्लिक्सका कारण हल र फिल्मकै अस्तित्व संकटमा पर्छ । नेटफ्लिक्सचाहिँ यस्ता बहसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो प्रभाव दु्रत गतिमा विस्तार गरिरहेको छ । वर्ष २०१८ मा यसले सवा अर्ब जनसंख्या भएको भारतलाई केन्द्रमा राख्यो । दुई हिन्दी फिल्म नेटफ्लिक्सबाटै वितरण गरियो, हलमा चलेनन् । नेटफ्लिक्स हिन्दी भाषीमाझ जोडिन यी फिल्मले अहं भूमिका खेले । ती कुन–कुन हुन् र किन रुचाइए ?
नेटफ्लिक्सको पहिलो ओरिजिनल हिन्दी फिल्म हो यो । निर्देशक हुन्, आनन्द तिवारी । भारतको मध्यमवर्गीय परिवारका युवायुवतीले आफ्नै घर बनाउने सपना देख्दा आइपर्ने अनेक लफडाको कथा भन्छ फिल्मले । मुख्य भूमिकामा छन्,विक्की कौशल(संजय) र अगिरा धर (करिना) । दुवै बैंकमा काम गर्छन्,अपार्टमेन्ट किन्न लालायीत छन् । मुम्बईमा एउटा स्किम आउँछ, किस्ताबन्दीमा अपार्टमेन्ट पाउने तर त्यसका लागि विवाहित जोडी हुनु पर्ने । संजय र करिना परे, अविवाहित । त्यसैले अपार्टमेन्ट किन्नका लागि मात्र कागजी विवाह गर्छन् । तर सम्बन्ध कागजमै सीमित हुन्छ कि मुटुसम्म पुग्ला ? बडो रोचक ढंगले देखाइएको छ ।
संजय हिन्दु हुन्छन्, करिना क्रिस्चियन । परिवारको आर्थिक हैसियत पनि मिल्दैन । संजयको अफिसकै हाकिम र करिनाको एक व्यापारीसँग अफेयर छ । तैपनि बाध्यताले नजिकिन्छन् । निर्देशक तिवारीले यसकै सेरोफेरोमा वर्तमान युवायुवतीको अस्थिर सोच, सपना र संघर्षको तालमेल नमिल्दाको परिणाम, भिन्न धर्म/जातिका परिवारबीच हुने मन मुटावलाई उधिनेका छन् । फिल्ममा खास तामझाम केही छैन तर तिवारी र सुमित ब्यास मिलेर लेखेको कसिलो पटकथाले दर्शकलाई बाँध्दै लान्छ । विक्की कौशललाई सशक्त अभिनेताका रुपमा चिनाउन यो फिल्मको प्रभावकारी भूमिका रह्यो । यस्तो चकलेटी भूमिकामा यसअघि उनी देखिएका थिएनन् । अगिरा धर पनि बलिउडका मूलधारका फिल्ममेकरमाझ ‘मार्क’ हुन सफल भइन् ।
सानो क्यानभासको मनछुने कथा र पात्र हेर्न चाहनेले लभ पर स्क्वायर फुट छुटाउनु हुन्न । बलिउडमा पात्र र विषयप्रधान फिल्मको खडेरी भएकाले पनि यो फिल्म विशेष लाग्छ ।
लीना यादव निर्देशित यस फिल्मले पुस्तान्तरको व्यथा उजागर गरेको छ । लीना उनै निर्देशकहुन्, जसको सिनेमा पाच्र्डले अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा काफी चर्चा बटुलेको थियो । राज्मा चावलको विषयचाहिँ पाच्र्डजस्तो संवेदनशील छैन । तर वर्तमान समयसँग असाध्यै नजिक छ । अर्थात्, अभिभावक र सन्तानबीचको बढ्दो दुरी । र यस फिल्मका युवा पात्रहरु पनिलभ पर स्क्वायर फुटकाजस्तै दोधार र अन्योलमा छन् ।
सरकारी सेवाबाट निवृत्त राज (ऋषि कपुर) छोरा कविर (अनिरुद्ध तन्वार)लाई औधि माया गर्छन् तर व्यक्त गर्न जान्दैनन् । आफ्नै सांगीतिक समूह खोलेको कविरचाहिँ बाबुसँग बोल्नै नपरोस् भन्ने ठान्छ । नयाँ दिल्लीबाट पुरानो दिल्लीमा बसाइँ सरेपछि बाबु–छोराको बोलचाल नै बन्द हुन्छ । त्यसपछि राजले केटीको नाममा नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर छोरासँग कुरा गर्न थाल्छन् तर एकदिन भेद खुल्छ । अब के होला ? फिल्म हेरिरहँदा लाग्छ– लीनाले यो समयका बुबा र छोरा दुवै पुस्ताको मनोविज्ञान पकड्न पूरापूर सफल छिन् ।
यस फिल्मको कथावाचन कमेडी शैलीको छ । बाबुछोराको रस्साकस्सीले हसाउँछ । सँगै हरेकको मनमा अभिभावक र सन्तानबीच किन खाडल बनिरहेको छ भन्ने सवाल खडा गर्छ । ऋषिक पुरले सदाझैँ जीवन्त काम गरेका छन् । डेब्यु अभिनेता अनिरुद्ध तन्वारले पनि पात्रमा आफूलाई समाहित गरेका छन् । पारिवारिक झमेलाकै कारण दिल्लीमा एक्लै बसिरहेकी युवतीको भूमिकामा अम्यरा दस्तुरले प्रशंसनीय काम गरेकी छन् ।
राज्मा चावलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेकै हरेक उमेर समूहका दर्शकले फिल्ममाकहीँ न कहीँ आफूलाई पाउनु हो ।